Dalka Shiinaha Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |INCHOI
Baaxadda lagu dabaqi karo:Mashiinka qalajinta suunka mesh-lakabka badan
Qalajiyaha-lakabka badan waa qalab qalajin joogto ah, oo ku habboon curis digir qallalan, ukunta la miiray, wax soo saarka digaagga, wax soo saarka beeraha iyo sideline, daawada dhirta Shiinaha, iwm ka dib markii nadiifinta, karinta, marinating iyo jeermis dilay bacaha qalajinta dusha iyo hawlaha fuuqbaxa.
Mashiinkaani waa qalab qalajinta qulqulka qulqulaya oo joogto ah oo lagu qalajiyo xariijimaha qaybaha iyo walxaha gobolka leh hawo wanaagsan.Mashiinku waxa uu ku habboon yahay agabka ay ka mid yihiin khudaarta qallafsan, daawaynta dhirta ee dawo dhaqameedka Shiinaha iyo kuwa kale, kuwaas oo biyaha ku jira ay yihiin kuwo aad u sarreeya, heerkulka sare ee qalajinta aan la oggolayn.Mashiinku wuxuu leeyahay faa'iidooyinka, xawaaraha qalajinta degdega ah, awoodda uumiga sare iyo tayada wax soo saarka wanaagsan.Waxyaabaha qallafsan & shaandhaynta keega waa in lagu sameeyaa qaybo ama xariijimo ka hor habka qalajinta.
Alaabta si isku mid ah ayaa loogu qaybiyaa suunka mesh feederiyaha alaabta.Suunka meshku wuxuu guud ahaan qaataa 12-60 mesh ahama bir ah waxaana sawiray aaladda gudbinta oo u dhaqaaqa gudaha qalajiyaha.Qalajiyaha ayaa ka kooban dhowr qaybood.Qayb kasta, hawada kulul ayaa loo qaybiyaa si gooni ah.Qayb ka mid ah gaasta daalan waxaa daalinaysa qafiifiyaha qiiqa qoyaanka ee gaarka ah.Gaaska wasakhda waxaa maamula qalab hagaajin ah.Hawada kulul waxay soo martaa suunka mesh-ka ah ee lagu daboolay wax biyaha keena.Suunka mesh-suunka ayaa si tartiib ah u socda, xawaaraha orodka si xor ah ayaa loo hagaajin karaa iyadoo loo eegayo hantida maaddada.Alaabooyinka ugu dambeeya ka dib habka qalajinta waxay si joogto ah ugu dhici doonaan alaab-ururinta.Unugyada wareegga sare iyo kuwa hooseeya waxay si xor ah u qalabaysan karaan iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha.Tirada qaybta waxaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo baahida wax soo saarka.
1 Qadarka hawada, heerkulka kulaylka, wakhtiga walxaha ku dheggan suunka iyo xawaaraha alaabta quudinta waa la hagaajin karaa si loo helo saamaynta qalajinta ugu fiican.
2 Isku-xidhka qalabku aad buu u fiican yahay.Waxay isticmaali kartaa nidaamka suunka dhaqida saafiga ah iyo qaboojinta nidaamka alaabta ceeriin.
3 Hawo kulul ayaa si wareeg ah loo marin karaa, tamarta si weyn ayaa loo badbaadiyay.
4 Qalabka qaybinta hawada gaarka ah, waxay ka dhigtaa hawada kulul si isku mid ah loo qaybiyo;Tani waxay dammaanad qaadi kartaa tayada alaabta.
5 Ilaha kulaylka waxaa laga dooran karaa uumiga, samaynta saliid kulaylka, koronto, iyo foornada dhuxusha iyo gubida saliidda
1) Codsiyo ballaaran: Waqtiga deggenaanshaha / qallajinta waa la hagaajin karaa min 15 daqiiqo ilaa 120 daqiiqo taas oo ka dhigaysa dabacsanaan si loo qalajiyo noocyada kala duwan ee alaabta ceeriin.
2) Badbaadinta tamarta: Noocyada kala duwan ee qaabka socodka hawada kulul iyo qolka qalajinta si fiican u dahaaran ayaa si weyn u yareyn kara luminta kulaylka.Wareegga hawada kulul waxaa loogu talagalay badbaadinta tamarta.
3) Qalajinta lebbiska ah: Qaybiyaha hawada kulul ee sida gaarka ah loo nashqadeeyay iyo aagagga qalajinta ayaa hubin kara socodka hawada isku midka ah ee dhinaca qolka qalajinta oo dhan si loo dammaanad qaado qalajinta isku midka ah.
4) Hawlgalka fudud iyo dayactirka: Nidaamka qalajinta oo dhan waa mid si toos ah u socda.Naqshadaynta fudud laakiin wax ku ool ah kaliya ma dhimi karto kharashka wax soo saarka laakiin sidoo kale kharashka dayactirka iyo dayactirka.
5) Ilaha kulaylka dabacsan: Isha kulaylka ee qalajinta waxay keeni kartaa uumi, koronto, biyo kulul, saliid kulayl ama saliid / gaas / dhuxul-biomass dab dhaliyaha hawada kulul.Waxaan naqshadeyn karnaa oo aan injineerin karnaa ilo kulayl oo kala duwan iyadoo loo eegayo xaaladaha dhabta ah ee macaamilka.
6) Noocyada kala duwan iyo lakabyada suunka mesh waa la heli karaa iyadoo lagu salaynayo walxo cayriin oo gaar ah iyo xaaladaha qalajinta.
1. Qalajinta ama qaboojinta alaabta qoyan ee granular (1-20mm);2. Meesha suunka lagu qalajiyo: 10-150 M2
6. Noocyada kala duwan ee qaabka socodka hawada, lakabka suunka (lakabyada 1-5) iyo suunka mesh waxaa loo qaabayn karaa iyadoo loo eegayo walxo gaar ah
Hore: MAASHINKA DHAQASHADA IYO BAASKIID/ DHALADA&KABADDA
Xiga: Nadiifinta xirmada dabacsan iyo hawo qallajinta (dubista) khadka wax soo saarka